Agaasimaha Ciyaaraha Ee Bayern Munich Hasan Salihamidzic oo Xaqiijiyay Sadio Mane Uu Kooxda Kaga Soo Biiri Doono
HomeSuuqa kala iibsigaAgaasimaha ciyaaraha ee Bayern Munich Hasan Salihamidzic oo xaqiijiyay Sadio Mane uu kooxda kaga soo biiri doono
June 22, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Agaasimaha ciyaaraha ee Bayern Munich Hasan Salihamidzic ayaa xaqiijiyay in Sadio Mane uu kooxda kaga soo biiri doono Liverpool xagaagan.
30 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa Talaadadii gaaray Germany si uu tijaabada caafimaadka u maro ka hor inta uusan u soo gabagabeyn u dhaqaaqistiisa kooxda ku guuleysata Bundesliga.
Bayern ayaa qarka u saaran inay bixiso 27.5 milyan ginni bilowga ah xiddiga heerka caalami ee dalka Senegal, kaasoo lagu kordhin karo ilaa 35 milyan ginni.
Salihamidzic ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in Bayern ay ogolaatay inay la soo wareegto Mane xagaagan, waxaana uu aaminsan yahay in weeraryahanka uu ku biirayo “si sax ah kooxda saxda ah” marxaladan xirfadiisa ciyaareed.
“Sadio waxa uu joogaa heerkii ugu sarreeyey ee xirfadiisa ciyaareed, isaga oo da’ weyn ku jira, waxa uu ku sugan yahay qaab aad u wanaagsan, waxa uu u baahi qabaa koobab,” Salihamidzic ayaa u sheegay Bild Talaadadii.
“Waxa uu joogaa kooxda saxda ah, dhamaanteen waan ku faraxsanahay waana ku faraxsanahay in xiddigan oo kale uu Bayern yimaado, gaar ahaan sababtoo ah ciyaaryahankan oo kale ayaa dabka ku shiday Bayern daqiiqadii ugu horeysay.
“Dhammaanteen, aniga, adiga, shaqaalaha tababarka iyo kooxda oo dhan ayay macno weyn ugu fadhidaa, waa wax cajiib ah in aanu awoodnay in aanu kooxdeena ugu guulaysano ciyaartoy noocaas ah”.